﻿2ပါဝင်တဲ့စတော်ဘယ်ရီ Fudge - ချက်ပြုတ်နည်းများ
ချက်ပြုတ်ရန် 1 ခွက်ခြောက်ခြောက်ဆန်
နှေးနှေး cooker အတွက် cob အပေါ်ပြောင်းဖူးချက်ပြုတ်
2 ပါဝင်တဲ့စတော်ဘယ်ရီ Fudge
cracker စည် crock အိုး hash အညိုရောင် casserole
ဤသည်စူပါရိုးရှင်းသောနှင့်အရသာ fudge ပဲအတူတူထားရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ! အရသာရှိရုံမကအရမ်းလှတယ်!
ဤသည်လှပသောစာရွက်ကနေအဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည် ကွတ်ကီးနှင့်ခွက်များ ငါကလုံးဝကိုချစ်! ၎င်းသည်တစ်နှစ်တာ၏မည်သည့်နေ့ရက်အတွက်မဆိုပြည့်စုံရုံတင်မကဘဲ Valentine's Day ၏ကောင်းမွန်သောဆက်ဆံမှုလည်းဖြစ်သည်။
သငျသညျပုံစံများကိုဖြတ်ဖို့ကွတ်ကီးဖြတ်သုံးနိုင်သည်! သင်သည်ဤစာရွက်တွင်နှင်းခဲအရသာများကိုလဲလှယ်နိုင်သည် (သို့) vanilla ကိုသုံးနိုင်သည်။ အခါအားလျော်စွာအစားအသောက်အရောင်အချို့ကိုထည့်နိုင်သည်။
သင်လိုအပ်သော Tools & Treats (အသေးစိတ် / ၀ ယ်ရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံကိုနှိပ်ပါ)
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်၃ မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်၈ မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၂၄ စာရေးသူHolly Nilssonဤသည်စူပါရိုးရှင်းသောနှင့်အရသာ fudge ပဲအတူတူထားရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ! အရသာရှိရုံမကအရမ်းလှတယ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၁၆ အောင်စ စတော်ဘယ်ရီနှင်းခဲ
▢၁၂ အောင်စ အဖြူရောင် Candy အရည်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်ချောကလက်ချစ်သူများဖြစ်သည်
လိုင်း9×9ဒယ်အိုးနှင့်စက္ကူနှင့်အတူဒယ်အိုး။
ခွက်သေးသေးလေးတစ်လုံးတွင်မိုက်ကရိုဝေ့ဖ်သကြားလုံးသည်အလယ်အလတ် ၃၀ တွင်အရည်ပျော်သည်။ ချောမွေ့သည်အထိမွှေပေးပါ။ ပေါင်းစပ်သည်အထိအေးခဲခြင်းနှင့်နှိုးဆော်၌ထည့်ပါ။
အရောအနှောကိုပြင်ဆင်ထားသည့်ဒယ်အိုးထဲသို့သွန်းလောင်းပြီးချောမွေ့စွာဖြန့်ပါ (ဆန္ဒရှိလျှင်ထိပ်ပေါ်တွင်ဖြန်းနိုင်သည်) ။ လုံးဝသတ်မှတ်သည်အထိရေခဲသေတ္တာ။ ဒီအရွယ်အစား pan ထဲမှာ, fudge အပိုင်းပိုင်းအကြောင်းကို 5/8″ အထူရှိပါတယ်။ သငျသညျပိုထူချင်လျှင်, နှစ်ဆသုတ်လုပ်ပါ။
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ 10 ရက်အထိသိုလှောင်ထား။
သော့ချက်စာလုံးစတော်ဘယ်ရီ Fudge သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။